ဆုံးမခြင်းကို WINDOWS UPDATE ကိုအမှားကုဒ် 800B0001 WINDOWS7ကို - WINDOWS ကို - 2019
Windows ကို update ကိုအမှားကုဒ် 800b0001 Windows ကို Fix ဖို့ကိုဘယ်လို 7
hidden settings ကို - စမ်းသပ်ဖြစ်ကြပြီးလေးနက် options များဖြစ်ကြသည်ရှိရာအထူး browser ကိုအပိုင်း, ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် Firefox ကိုဦးတည်သွားစေနိုင်သည့်မဲ့ပြောင်းလဲမှု။ ဤအပိုင်းကိုသာမန်အသုံးပြုသူများအများ၏မျက်စိကနေဝှက်ထားလျက်ရှိ၏ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ကသူတို့ရဲ့အစွမ်းအစ၌ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်လျှင်, သင်ကျိန်းသေ browser ကိုအပိုင်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။
Firefox မှာဝှက်ထားသော settings ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အောက်ပါလင့်ခ်မှကို browser ရဲ့လိပ်စာဘားကိုသွားပါ:
မျက်နှာပြင်မဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအပြောင်းအလဲများ၏အမှု၌ browser ကို output ကိုအန္တရာယ်များတဲ့ပျက်ကွက်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုသတိပေးပြပေးလိမ့်မယ်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ငါသည်အန္တရာယ်ယူ!".
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးက hidden settings ကို Firefox ကို
app.update.auto - အလိုအလျောက် update ကို Firefox ရဲ့။ ဒီ setting ကိုပြောင်းခြင်း browser ကိုအလိုအလျှောက် update လုပ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Firefox ကို၏လက်ရှိ version ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုလျှင်အချို့သောကိစ္စများတွင်, ဒီ function ကိုလိုအပ်မည်အကြောင်း, သို့သော်, မလိုအပ်ဘဲမသုံးသင့်ပါတယ်။
browser.chrome.toolbar_tips - Tooltip သင်သည်ထို site ဒါမှမဟုတ် browser ကို interface ကိုတခုတခုအပေါ်မှာကို item ကျော် mouse ကိုပျံဝဲအခါ။
browser.download.manager.scanWhenDone - သင့်ကွန်ပျူတာ, Antivirus ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါဖိုင်များကိုစိစစ်အတည်ပြု။ သင်ဤ option ကို disable သောအခါ, browser ကိုဖိုင်တွေကိုဒေါင်းလုဒ်ပိတ်ဆို့, ဒါပေမယ့်လည်းကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှဒေါင်းလုပ်လုပ်အန္တရာယ်များတိုးမြှင့်မည်မဟုတ်။
browser.download.panel.removeFinishedDownloads - ဒီ option ကို activation အလိုအလျောက် browser မှာပြီးစီးခဲ့ downloads, စာရင်းလွှဲမည်။
browser.display.force_inline_alttext - တက်ကြွ, ဒီ parameter သည်ကို browser အတွက် image ကိုပြပေးလိမ့်မယ်။ သင်အသွားအလာအပေါ်အများကြီးကိုကယ်တင်ရှိပါကကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်,, သင်သည်ဤ option ကို disable နိုင်ပြီး, image ကို browser ကိုပြသမည်မဟုတ်ပါ။
browser.enable_automatic_image_resizing - ရုပ်ပုံများကိုအလိုအလျောက်တိုးနှင့်ကျဆင်းခြင်း။
browser.tabs.opentabfor.middleclick - မောက်ဘီးခလုတ်ကို link ကိုနှိပ်တာဖြစ်ပါတယ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (အမှန်သတ်မှတ်ထားမှားယွင်းသောတန်ဖိုးကိုအသစ်တခု window ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်သစ်တစ်ခု tab ကိုအတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်) ။
extensions.update.enabled - ဒီ option ကို activation extension များအဘို့ updates များကိုတစ်ဦးအလိုအလျောက်ရှာဖွေ installation ကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
geo.enabled - တည်နေရာမှာ Automatic ပြဌာန်းခွင့်။
layout.word_select.eat_space_to_next_word - သို့သော်လည်း parameter နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရသောအခါကို double-click နှိပ်. ပေါ်မှာမောက်နှင့်အတူ (စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးကိုတစ်ဦးအာကာသဖမ်းပြီးမှညာဘက်ကိုထပ်မံဖြစ်လိမ့်မည်, အယူမှားတန်ဖိုးကိုသာစကားလုံးမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်) ၏ခွဲဝေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။
media.autoplay.enabled - HTML5 ကို-ဗီဒီယိုအလိုအလျောက်ပြန်ဖွင်။
network.prefetch-လာမယ့် - browser ကိုအများဆုံးဖွယ်ရှိအသုံးပြုသူခြေလှမ်းထင်ကြောင်းလင့်များ၏ Pre-တင်။
pdfjs.disabled - ကသင်ဘရောက်ဇာကိုပြတင်းပေါက်တိုက်ရိုက် PDF ကို-စာရွက်စာတမ်းများပြသရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်မီနူးက hidden Mozilla Firefox browser ကို setting တွင်ရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာတပြင်လုံးကိုစာရင်းမဟုတ်ပါဘူးစာရင်းဝင်ပြီ။ သင်ဤ menu ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့လျှင်မိမိတို့အဘို့ 'Mozilla Firefox browser ကို၏အကောင်းဆုံးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်စရာစူးစမ်းလေ့လာမယ့်အချိန်ကိုရွေးပါ။